Vamwe Vakuru Kwatiri—Kudzidza Kungaita Vana Kuti Vabatsirwe
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Krio Kwanyama Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Maya Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Nepali Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tatar Thai Tigrinya Tiv Tongan Tsonga Turkish Turkmen Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
NDINE chokwadi chokuti unobvuma kuti vamwe vakuru kana kuti vane simba kupfuura iwe neni. Ko iwe waungati mukuru ndiani?— Jehovha Mwari mukuru. Ko Mwanakomana wake, Mudzidzisi Mukuru? Mukuru kwatiri here?— Chokwadi mukuru.
Jesu akanga ararama naMwari kudenga. Akanga ari Mwanakomana womudzimu, kana kuti ngirozi. Mwari akaita dzimwe ngirozi kana kuti vanakomana vomudzimu here?— Hungu, akaita mamiriyoni adzo akawanda. Ngirozi idzi ihuru kwatiri uye dzine simba rinopfuura redu.—Pisarema 104:4; Dhanieri 7:10.
Uchiri kuyeuka here zita rengirozi yakataura naMariya?— Yainzi Gabrieri. Yakaudza Mariya kuti mwana wake aizova Mwanakomana waMwari. Mwari akaisa upenyu hwoMwanakomana wake womudzimu muna Mariya kuitira kuti Jesu aberekwe somwana pasi pano.—Ruka 1:26, 27.
Chii icho Mariya naJosefa vangava vakaudza Jesu?
Unotenda chishamiso ichocho here? Unotenda kuti Jesu akanga ambogara naMwari kudenga here?— Jesu akataura kuti akanga adaro. Jesu akaziva sei nezvezvinhu zvakadaro? Pamwe paakanga achiri chikomana, Mariya akamuudza zvakanga zvataurwa naGabrieri. Uyewo, zvimwe Josefa akaudza Jesu kuti Mwari ndiye akanga ari Baba vake chaivo.
Jesu paakabhabhatidzwa, Mwari akatotaura ari kudenga achiti: “Uyu ndiye Mwanakomana wangu.” (Mateu 3:17) Uye usiku hwakatangira kufa kwake, Jesu akanyengetera achiti: “Baba, ndipei mbiri parutivi rwenyu nembiri yandaiva nayo parutivi rwenyu nyika isati yavapo.” (Johani 17:5) Jesu akakumbira Mwari kuti adzokere kudenga kuti anogara naye zvakare. Aigona kunogara ikoko sei?— Aigona bedzi kana Jehovha Mwari aimuitazve munhu womudzimu asingaoneki, kana kuti ngirozi.
Zvino ndinoda kukubvunza mubvunzo unokosha. Ngirozi dzose dzakanaka here? Unofungei?— Pane imwe nguva dzose dzakanga dzakanaka. Zvakanga zvakadaro nokuti dzakanga dzasikwa naJehovha, uye zvinhu zvose zvaanoita zvakanaka. Asi zvino imwe ngirozi yacho yakazova yakaipa. Izvozvo zvakaitika sei?
Kuti tiwane mhinduro tinofanira kudzokera shure apo Mwari akasika murume nomukadzi vokutanga, Adhamu naEvha. Vamwe vanhu vanotaura kuti nhau yavo inongova ngano zvayo. Asi Mudzidzisi Mukuru aiziva kuti yakanga iri yechokwadi.
Mwari paakasika Adhamu naEvha, akavaisa mubindu rakanaka kwazvo munzvimbo yainzi Edheni. Yakanga iri paki, paradhiso. Vangadai vakava nevana vakawanda, mhuri huru, uye vakagara muParadhiso nokusingaperi. Asi paiva nechidzidzo chinokosha chavaifanira kudzidza. Tatochidzidza. Ngatione kana tichiri kuchiyeuka.
Chii chingadai chakaita kuti Adhamu naEvha vararame muParadhiso nokusingaperi?
Jehovha akaudza Adhamu naEvha kuti vaigona kudya michero yose yavaida mumiti yomubindu. Asi paiva nomuti mumwe chete wavaisafanira kudya. Mwari akavaudza zvaizoitika kudai vaizoudya. Akati: ‘Muchafa zvechokwadi.’ (Genesisi 2:17) Naizvozvo ndechipi chakanga chiri chidzidzo icho Adhamu naEvha vaifanira kudzidza?—
Chakanga chiri chidzidzo chokuteerera. Chokwadi, kuti tirarame tinofanira kuteerera Jehovha Mwari! Zvakanga zvisina kukwana kuti Adhamu naEvha vangotaura kuti vaizomuteerera. Vaifanira kuratidza kuti vaizodaro nezvavaiita. Kana vaiteerera Mwari, vaizove vachiratidza kuti vaimuda uye vaida kuti ave Mutongi wavo. Nokudaro vangadai vakararama nokusingaperi muParadhiso. Asi kudai vaizodya muti iwoyo, zvaizoratidzei?—
Zvaizoratidza kuti vaisaonga zvechokwadi zvavakanga vapiwa naMwari. Waizodai wakateerera Jehovha here kudai wakanga uripo?— Pakutanga, Adhamu naEvha vakateerera. Asi mumwe munhu aiva mukuru kwavari akanyengedza Evha. Akamuita kuti asateerera Jehovha. Ndiani iyeye?—
Ndiani aiita kuti nyoka itaure naEvha?
Bhaibheri rinoti nyoka yakataura naEvha. Asi iwe unozviziva kuti nyoka pachayo haigoni kutaura. Saka yakagona sei kutaura?— Ngirozi yakaita kuti zviratidze sokuti nyoka yakanga ichitaura. Asi chaizvo yakanga iri ngirozi yaitaura. Ngirozi yacho yakanga yatanga kufunga zvinhu zvakaipa. Yaida kuti Adhamu na- Evha vainamate. Yaida kuti vaite zvinhu zvayaitaura. Yaida kutora nzvimbo yaMwari.
Naizvozvo ngirozi yakaipa iyoyo yakaisa pfungwa dzakaipa mupfungwa dzaEvha. Ichishandisa nyoka, yakati kwaari: ‘Mwari haana kukuudzai chokwadi. Hamufi kana mukadya muti uyo. Muchava vakachenjera saMwari.’ Waizodai wakatenda zvakataurwa nenzwi iroro here?—
Evha akatanga kuda chimwe chinhu chaakanga asina kupiwa naMwari. Akadya muchero kubva pamuti wakarambidzwa. Akazopawo Adhamu mumwe wacho. Adhamu haana kubvumirana nezvakataurwa nenyoka. Asi kuda kwake Evha kwakanga kwakasimba kupfuura kuda kwake Mwari. Naizvozvo akadyawo muchero wacho.—Genesisi 3:1-6; 1 Timoti 2:14.
Zvakaguma nei?— Adhamu naEvha vakava vasina kukwana, vakakwegura, ndokufa. Uye nemhaka yokuti vakanga vasina kukwana, vana vavo vose vakanga vasinawo kukwana uye pakupedzisira vakakwegura vakafa. Mwari akanga asina kunyepa! Zvechokwadi upenyu hunobva pakumuteerera. (VaRoma 5:12) Bhaibheri rinotiudza kuti ngirozi yakanyepera Evha inonzi Satani Dhiyabhorosi, uye dzimwe ngirozi dzakava dzakaipa dzinonzi madhimoni.—Jakobho 2:19; Zvakazarurwa 12:9.
Chii chakaitika kuna Adhamu naEvha pavakarega kuteerera Mwari?
Iye zvino, unogona kunzwisisa here kuti nei ngirozi yakanaka iyo Mwari akanga aita yakava yakaipa?— Nokuti yakatanga kufunga zvinhu zvakaipa. Yaida kuva Yokutanga. Yaiziva kuti Mwari akanga audza Adhamu naEvha kuti vaite vana, uye yaida kuti vose vainamate. Dhiyabhorosi anoda kuita kuti munhu wose asateerera Jehovha. Naizvozvo anoedza kuisa pfungwa dzakaipa mupfungwa dzedu.—Jakobho 1:13-15.
Dhiyabhorosi anoti hapana munhu anoda Jehovha zvechokwadi. Anoti iwe neni hatidi Mwari uye hatidi chaizvo kuita zvinotaurwa naMwari. Anotaura kuti tinoteerera Jehovha bedzi kana zvinhu zvose zvichienda nenzira yatinoda. Dhiyabhorosi ari kutaura chokwadi here? Ndizvo zvatiri here?
Mudzidzisi Mukuru akati Dhiyabhorosi anonyepa! Jesu akaratidza kuti aida Jehovha zvechokwadi nokumuteerera. Uye Jesu haana kuteerera Mwari pazvaiva nyore bedzi. Akazviita nguva dzose, kunyange apo vamwe vanhu vaimuomesera. Akaramba akatendeka kuna Jehovha kusvikira afa. Ndicho chikonzero nei Mwari akamumutsa kuti ararame nokusingaperi.
Naizvozvo ndiani waungati ndiye muvengi wedu mukuru?— Hungu, ndiSatani Dhiyabhorosi. Unogona kumuona here?— Chokwadi hazvibviri! Asi tinoziva kuti ariko uye kuti mukuru uye ane simba kutipfuura. Asi, ndiani mukuru kupfuura Dhiyabhorosi?— Jehovha Mwari mukuru. Naizvozvo tinoziva kuti Mwari anogona kutidzivirira.
Verenga pamusoro pewatinofanira kunamata pana: Dheuteronomio 30:19, 20; Joshua 24:14, 15; Zvirevo 27:11; naMateu 4:10.